यी होटलमा बस्न सकिन्छ आइसोलेसन, कति पर्छ शुल्क? :: Setopati
यी होटलमा बस्न सकिन्छ आइसोलेसन, कति पर्छ शुल्क?
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज २४
के तपाईंलाई कोरोना संक्रमण भएको छ? आइसोलेसनमा बस्न उपयुक्त ठाउँ पाउनु भएको छैन? अनि पैसा तिरेरै भए पनि आइसोलेसनमा बस्ने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ?
छ भने काठमाडौंका केही होटल तपाईंका लागि राम्रा विकल्प हुन सक्छन्।
यीमध्ये हामीले यहाँ दुई होटलसँग कुरा गरेका छौं।
१. होटल होलिडे ताज, बागबजार
होटल होलिडे ताजका संस्थापक एवम् मार्केटिङ प्रबन्धक भिमप्रसाद काप्रीका अनुसार यही बिहीबारदेखि यहाँ आइसोलेसन व्यवस्था गरिएको छ।
सुरूमा सरकारले विदेशबाट आएकाहरूलाई होटलमा क्वारेन्टिन राख्ने व्यवस्था अनुरुप होलिडे ताजलाई पनि सूचीमा राखेको थियो। तर सेवाग्राही नभएपछि आफूहरूले आइसोलेसन व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।
'सरकारले हाम्रो होटल पनि क्वारेन्टाइनका लागि सूचीमा तोकेको थियो। सेवाग्राही नै भएनन्,' काप्रीले भने, 'व्यवसाय ठप्प छ। कर्मचारी पाल्नै मुश्किल भइसक्यो। त्यसैले सेवा र व्यवसाय दुवै हुने तरिकामा हामीले बिहीबारदेखि आइसोलेसन सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं।'
यसअघि होटल क्वारेन्टाइनका लागि मात्र उपलब्ध थियो। होलिडे ताज 'टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड' होटल हो।
कुल ७५ कोठामध्ये ६० कोठा आइसोलेसनका लागि तोकिएको छ। क्वारेन्टाइनका लागि गरिएको व्यवस्थाको तुलनामा थप सतर्कता समेत अपनाएको उनी बताउँछन्।
'आइसोलेसनका लागि संक्रमित व्यक्तिहरू आउने हो। उहाँहरूका सेवाका लागि हामी आफैंले समेत थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ,' काप्रीले भने, 'मास्क र स्यानिटाइजर सहित प्रत्यक कर्मचारीको लागि पिपिई व्यवस्था छ। होटलका सबै कर्मचारीको बीमा पनि गरेका छौं।'
उनका अनुसार स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिएका संक्रमितलाई मात्र होटलले सेवा पुर्‍याउने हो। तर आइसोलेसनमा रहँदा कुनै समस्या देखिए बिरामीका लागि होटलले 'अन-कल' चिकित्सा सेवा व्यवस्था मिलाएको छ। स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखिने बिरामी छन् भने उनीहरूलाई अस्पताल नै जान सल्लाह दिने उनले बताए।
होटलले संक्रमित निको नहुन्जेल आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
-होटल होलिडे ताजमा आइसोलेसन बस्न कति तिर्नुपर्छ?
काप्रीका अनुसार आइसोलेसनमा खाना-खाजा व्यवस्थासहित कोठाको शुल्क साढ‍‍े ६ हजार हाराहारी पर्छ। एक व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्दा दिनको पाँच हजार रूपैयाँ तिर्ने हो। यसमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसरी हिसाब गर्दा लगभग साढे ६ हजार हुन आउँछ।
त्यस्तै दुई जना संक्रमित एकै कोठामा सँगै आइसोलेसन बस्नेलाई अलि कम शुल्क छ। दुई जना बस्ने भए एक दिनको करिब ९ हजार पर्छ। सात हजार शुल्कमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर यो रकम तोकिएको हो।
त्यस्तै आइसोलेसनमा बस्नेका लागि खाजा-खानाको पनि राम्रो व्यवस्था मिलाएको काप्री दावी गर्छन्। उनका अनुसार यसरी बस्नेलाई दिनको खाना-खाजा गरी दिनको चार पटक खानेकुरा दिइन्छ- बिहान ब्रेकफास्ट। मध्यान्हमा खाना। दिउँसो खाजा र बेलुकी खाना।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन राम्रो आहारको आवश्यक बुझेर आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई माछा-मासु, फलफूल, गेडागुडी लगायत पौष्टिक खाना तयार पारिने काप्री ग्यारेन्टी दिन्छन्। त्यस्तै कसैलाई होटलले दिनेबाहेक बेग्लै केही खान मन लागे अलग्गै पैसा तिरेर मगाउन पनि सक्ने उनले बताए।
आइसोलेसनमा बस्नेका लागि कोठाबाहिर ढोकामा टेबल राखिनेछ। र, त्यहीँ होटलका कर्मचारीले खाना राखिदिने छन्।
होटलले दिने यो प्याकेजमा इन्टरनेट, टिभी र एसी चलाएको शुल्क पनि जोडिएकै हुन्छ। अलग्गै तिर्न पर्दैन।
२. होटल नेपाल ट्रेकर्स हाउस
होटल नेपाल ट्रेकर्स हाउसले पनि आफ्ना कोठा आइसोलेसनमा दिँदै आएको छ। होटलका प्रबन्धक सुदीप भट्टका अनुसार आइतबारदेखि उनीहरूले कोठा आइसोलेसनका लागि बुकिङ खोलेका हुन्।
'कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीलाई आइसोलेसनका लागि कहाँ जाने भन्ने समस्या हुन्छ। यस्तोमा हामीले सेवा र व्यवसाय दुवै गर्न सकिने देख्यौं। त्यसैले कोठाहरू आइसोलेसनका लागि उपलब्ध गराएका हौं,' भट्टले सेतोपाटीलाई भने।
अहिले होटलमा ३ जना आइसोलेसनमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। हालसम्म संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उनको भनाइ छ।
-होटल नेपाल ट्रेकर्स हाउसमा आइसोलेसन बस्न कति तिर्नुपर्छ?
प्रबन्धक भट्टका ट्रेकर्स हाउसमा आइसोलेसनमा बस्दा एक व्यक्तिले एक दिनको शुल्क ४ हजार ५ सय २० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो भ्याटसहितको रकम हो।
त्यस्तै एकै कोठामा दुई जना सँगै बसे अलि कम पर्छ। यसमा एक व्यक्तिले एक दिनमा ३ हजार र १३ प्रतिशत भ्याट गरी करिब साढे तीन हजार तिर्दा पुग्छ।
यो शुल्कमा ट्रेकर्स हाउसले संक्रमितलाई बिहानको ब्रेकफास्ट, मध्यान्ह खाना, दिउँसो खाजा र बेलुकी खाना खुवाउने भट्टले जानकारी दिए।
उनका अनुसार होटलले स्वस्थकर र सन्तुलित खानामा प्राथमिकता दिएको छ। होटलका कर्मचारीले खाना प्याकेजिङ गरेर कोठामा पुर्‍याउँछन्।
ट्रेकर्स हाउसमा आइसोलेसनका लागि सम्पर्कः ९८४९२३४७१८
होटल होलिडे ताजमा आइसोलेसनका लागि सम्पर्कः ९८५१०७११०५ (भिमप्रसाद काप्री)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २४, २०७७, ०३:५१:००